Gobolkii Shiinaha ee cudurka Kooro ka bilaabmey oo xanibaada laga qaadayo beri - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gobolkii Shiinaha ee cudurka Kooro ka bilaabmey oo xanibaada laga qaadayo beri
Masuuliyiinta Shiinaha ee gobolkii cudurka Kooro ka bilaabmey ayaa sheegay in berito oo Arbaca ah laga qaadi doono xanibaada dhinaca safarka kadib markii muddo laba bila ah uu ku jirey takoorid. Gobolkan ayaan haba yaraatee laga helin kiisas cusub maalintii lixaad.
Magaalada xudunta u ahayd hargabka Kooro ee Wuhaan ayaa iyadana laga qaadayaa xanibaada dhinaca safarka bisha soo socota sideedeeda. Dadka ka baxaya magaalada ayaa la siin doonaa shahaadada ah inay saafi ka yihiin cudurka.
Haddii laga waayo kiisas cusub waxa Shiinuhu ku dhawaaqi doonaan inay ka guulaysteen hargabka Kooro ee hadda Yurub faro ba’an ku haya. Shiinaha ayaa lagu amaanay talaabada ay ka qaadeen cudurka Kooro ayagoo hadda leh waxa cudurka ka imaanaya oo keliya dadka soo galaya dalka.
Qalabka ugu badan ee lagula tacalayo hargabka Kooro ayaa ka yimaada Shiinaha iyo Turkiga.